Asahi Broadcasting Corporation – Networks – MMANIME
Kiznaiver Kiznaiver Info Anime Title: Kiznaiver Japanese: キズナイーバー Genres: Sci-Fi, Drama, Romance Type: TV Status: Finish Airing Episode: 12 Aired: Apr 9, 2016 to Jun 25, 2016 Season: Spring 2016 Studio: Trigger Duration: 24 min per ep Score: 7.48 Synopsis : ဆူဂိုမိုရီဆိုတဲ့ မြို့လေးမှာ အခြေတည်ထားပြီး လူတွေ စမ်းသပ်တီထွင်ပြီး ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့ ကြံစည်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိပါတယ်... ကတ်စုဟိရာကွန် ခေါ်နာကျင်မှုကိုမခံစားတတ်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရှိတယ်။ တစ်နေ့မှာ အဲ့ကောင်လေးက ထူးဆန်းတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်..အဲတာက ဆူနိုဇာကီ။ နောက်တစ်နေ့မှာ ကတ်စုဟိရာ နဲ့အတန်းဖော်တွေဆီမှာ ထူးခြားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်...အဲတာ သူတို့ ...
Iwa Kakeru! Sport Climbing Girls Iwa Kakeru! Sport Climbing Girls က sport anime လေးတဈခုဖွဈပါတယျ Climbing အားကစားနညျးကခန်ဓာကိုယျရောဦးနှောကျပါသုံးရတဲ့ အားကစားနညျးတဈမြိုးပါ ဉာဏျစမျးပဟဋေိဂိမျးတှမှောကြှမျးကငျြတဲ့ အထကျတနျးပထမနှဈကြောငျးသူ Kasahara Konomi ဟာ ကြောငျးစတကျတဲ့နမှေ့ာ ကြောငျးမှာရှိတဲ့ climbing wall ကိုတှသှေ့ားခဲ့ပွီး သူ့အမွငျမှာတော့ အဲ့အားကစားကိုပဟဋေိဂိမျးတဈခုလို့မွငျသှားပါတယျ အဲ့နောကျ Konomi ကကြောငျးရဲ့Hanamiya အသငျးထဲကိုဝငျပွီး climbing ရဲ့ထပျဆုံးရောကျအောငျယှဥျပွိုငျတာတှကေိုတှမွေ့ငျရမှာပါ #LCAM Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8
Gangsta. Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12
My Roommate isaCat English Title - My Roommate isaCat Japanese Title - 同居人はひざ、時々、頭のうえ (Dōkyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue) MM Sub Translation Page - Takashi Senpai Translator - Ko Phyo Wai Than Genres - Slice of life, comedy Episodes - 12 Duration - 23 min per episode Main Characters - Mikazuki Subaru & Haru Download links! Ep 1 : here Ep2: here Ep3: here Ep4: here Ep5: here Ep6: here Ep ...